Fa maninona ny saka no misakafo fatratra? | Noti saka
Maria Jose Roldan | | sakafo, curiosities
Ny fotoam-pisakafoanana dia tokony ho fotoana mangina ho an'ny rehetra, na roa na efatra ny tongony. Fa indraindray kosa dia sendra saka iray isika izay toa maika hamita ny sakafony ary manomboka manao zavatra hafa. Inona no azo atao amin'ireto tranga ireto?
Rehefa misakafo fatratra ny saka dia fantatro fa tonga ny fotoana tokony hampiahiahy. Tsy mahazatra ahy ny misakafo be dia be ary haingana be. Hanampy anao, zava-dehibe ny fahalalana aloha ny antony anaovanao azy.
1 Fa maninona ny saka no misakafo fatratra?
1.1 Zaza kamboty kamboty io
1.3 Izy dia mitebiteby amin'ny natiora
1.4 Mandehana noana
1.5 Sakafo ambany kalitao
1.6 Fahantrana sy olana ara-pihetseham-po
1.7 Antony hafa
2 Inona no tokony hatao hanampiana anao?
Manaraka izany dia ho hitantsika ny antony hahafahanao mahatakatra ny antony hafa mety mahatonga ny saka anao hanana io fiheverana io amin'ny sakafo ary izany no mahatonga azy hihinana fatratra.
Zaza kamboty kamboty io
Ny saka izay tsy nohanin'ny reniny, na inona na inona antony, dia matetika no lehibe manome ny fahatsapana fa noana foana. Izany dia satria eo am-pofohanay amin'ny tavoahangy azy isika dia tsy miaro azy loatra ka tsy tiantsika ho mosarena iray minitra io, izay lozika. A) Eny, Ny kely dia mihalehibe mahafantatra fa hanana sakafo eo am-pelatanany foana izy ary tsy hisy hiteny aminy na inona na inona momba ny sakafo, ka araraotiny.
Na izany aza, avelan'ny reniny ho mosarena kely ireo zanany. Tokony hataonao raha tianao hianatra hitady ny sakafon'izy ireo samirery izy satria tsy ho eo akaikinao mandrakizay izy.
Raha ao an-trano dia misy zava-manan'aina hafa (saka, alika na olona) izay tsy mamela anao irery, izany hoe manenjika na mijery anao hatrany, izay te-hihazona anao eo am-pelatananao ary, raha fintinina, Aza avela hitondra fiainana milamina fanaon'ny saka ianao, mety hahatsapa fa kely dia kely ny fotoana fisakafoanana. Rehefa mahita fotoana izy amin'ny farany mihinana haingana izy satria fantany fa na ho ela na ho haingana dia hampijaliana azy indray.
Izy dia mitebiteby amin'ny natiora
Saka manaitaitra mirona hihinana ny sakafony haingana kokoa noho ny ambiny, tsy noho izy ireo mitondra fiainana ratsy fa tsotra fotsiny satria toy izany izy ireo. Mila manam-paharetana ianao ary manandrana mitady vahaolana hialana amin'ny kenda.
Mety nanjary variana loatra tamin'ny sakafonao ny saka satria tsy ampy sakafo, satria noana izy ary rehefa omenao sakafo izy dia saika naka ny fofonainy hamita ny zavatra rehetra.
Mety noho izy noana be na satria raha manana saka bebe kokoa ianao dia indraindray noana noana rehefa nohanin'ny saka hafa ny sakafony. Noho izany Zava-dehibe fa raha manana saka mihoatra ny iray ao an-trano ianao, dia samy manana ny mpanome sy ny misotro azy avy.
Mety any aoriana any dia mihinana any amin'izay fihinan'ny olon-drehetra ny tsirairay, fa ho ampy kosa ny tsirairay mba hihinana ny anjarany ary tsy ho noana.
ara-dalàna, ny saka dia afaka mihinana arakaraka ny tinady nefa tsy misy olana satria ny sakafon'izy ireo manokana ihany ary mijanona izy ireo rehefa afa-po. Fa raha manana saka tsy mety mihinana loatra ianao, dia tsy maintsy ampidininao ny fatran'ny sakafo.
Raha mitranga aminao izany dia tokony ho fantatrao fa ny saka dia afaka mihinana indray mandeha na indroa isan'andro ary dia ho azy ireo raha ampy ny habetsany.
Sakafo ambany kalitao
Mety hieritreritra ianao fa manana ny kalitaony ny Heveriko fa omenao ny saka, saingy raha ny tena izy dia tsy ampy otrikaina sy vitamina ilaina izy ireo mba hanana fahasalamana tsara na farafaharatsiny hahatsapa ho afa-po amin'ny fihinanana.
Raha izany no izy, raha mieritreritra aho fa ambany ny saka omenao ny saka dia ara-dalàna raha mitady na mangataka sakafo bebe kokoa izy. Tsy mamahana azy tsara ianao ary mila otrikaina! Miresaha amin'ny mpitsabo anao raha mila torohevitra momba ny fahana izay tena mahatonga azy hahatsapa ho afa-po ary mandritra izany fotoana izany dia tandremo ny fahasalamanao na anatiny sy ivelany.
Ny saka dia mila proteinina sy sakafo misy kalitao tsara. Tsy maninona na tanora ianao na antitra, ny sakafo dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny filanao ara-batana, ara-tsaina ary ara-pihetseham-po.
Ahoana ny fomba hisafidianana ny saka saka tsara indrindra?
Fahantrana sy olana ara-pihetseham-po
Mety hitranga ihany koa ny saka te-hihinana satria mankaleo azy, na manana olana ara-pihetseham-po fantatra amin'ny anarana hoe "fitondran-tena ara-tsakafo tsy ara-dalàna". Midika izany fa ny saka anao dia andevozin'ny sakafo, miaraka amin'ny vokany rehetra mety hateraky ny fahasalamanao.
Raha mitranga aminao izany tsy maintsy hampiofana azy hanova ny fihetsiny ianaoRaha ilaina dia mila miresaka amin'ny manam-pahaizana momba ny fitondran-tena ianao mba hamily ity fihetsika ity. Fa tsy hitranga izany raha sendra soritr'aretina ianao toy ny:
Rehefa avy nihinana izy dia te hihinana ny sakafon'ny biby hafa ary na ny anao aza
Hitsambikina ambony latabatra hihinana izay eo amboniny
Toa kivy izy rehefa mametraka sakafo ao anaty sakafony
Mitady fiheverana tsy tapaka avy amin'ny tompony
Mihinana zavatra na mitsako azy ireo na dia tsy sakafo aza
Ireto soritr'aretina ireto dia tena ilaina tokoa satria ao amin'io fomba io no hahafantaranao raha tena izany no mitranga aminao manasitrana azy haingana araka izay tratra.
Na dia ny hitantsika aza hatreto no tena antony mahatonga ny saka hihinana amin'ny fanahiana, misy kosa ny hafa izay tsy mila lavintsika:
Tiany ny sakafonyAnkafiziny be izany ka tsy zakany fa natelina azy haingana toa azy.
Marary izy: misy aretina sasany, toy ny hypothyroidism, mijaly amin'ny tsy fifandanjan'ny tiroid na manana diabeta izay anisan'ny soritr'aretin'izy ireo ny fitomboan'ny fahazotoan-komana. Saingy tsy tokony hatahotra ianao fa ny ankamaroan'ny aretina dia azo tsaboina.
Inona no tokony hatao hanampiana anao?
Raha vao hita ny antony dia tonga ny fotoana tokony hihetsika. Ny iray amin'ireo zavatra izay miasa matetika dia mividy feeder manokana ho an'ny biby mitebiteby, toa izao:
Ka ny kely tsy maintsy miasa kely ianao hahazoana ny sakafonao, izay hanery anao hihinana miadana kokoa. Fa ankoatr'izay dia tena ilaina ny manome toerana azo antoka sy mangina hahafahany mamelona ny tenany nefa tsy mila miahiahy na inona na inona, ohatra ny efitranonao ohatra.
Tadidio ihany koa fa raha iharan'ny antsojay ianao tsy maintsy mametraka fetra voafaritra isika mba hiara-miaina sambatra ny olona ao an-trano. Tokony hanaja ny mpikambana tsirairay isika, raha tsy izany dia hitranga ny olana. Raha manana fisalasalana momba ny fomba hahatakarana ny saka ianao, amin'ny Ity lahatsoratra ity Izahay manome anao ny lakile mba hahasoa anao roa tonta ny fifandraisanareo.
Raha tsy misy manampy ny saka anao io dia miresaha amin'ny mpitsabo anao na manam-pahaizana raha sanatria tsy mihatsara ny raharaha. Mandritra izany fotoana izany dia azonao atao an-tsaina ireto torohevitra ireto:
Tandremo izy ary mandania fotoana kalitao amin'ny sakao
Omeo sakafo tsara kalitao izy
Omeo sakafo mando indroa isan-kerinandro izy ho fanampin'ny sakafo maina azy
Manampia rano hosotroiny bebe kokoa fa tsy ho maina rano ary hahatsapa ho voky maharitra
Tazomy ny fahazarana misakafo isan'andro (ohatra indroa isan'andro), na omeo im-betsaka mandritra ny andro izy, fa amin'ny kely kokoa
Raha mangataka sakafo aminao izy dia aza hadino
Miezaha mampifanaraka ny fotoam-pisakafoanao amin'ny fotoanany mba hialana amin'ny fifanolanan-tsaina
Aza omena sakafo fanampiny izy satria onena azy ianao
Amin'ireto torohevitra ireto dia ho tsara kokoa ny sakao, azo antoka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » sakafo » Fa maninona ny saka no misakafo fatratra?
Marcelo, Rosario, Arzantina dia hoy izy:
Ny fampahalalana rehetra atolotra amin'ity tranonkala ity dia tena ilaina: fiteny fohy sy mazava ary miaraka amina namana. Misaotra!
Valiny tamin'i Marcelo, Rosario, Arzantina
Misaotra tamin'ny teninao, Marcelo 🙂.